Blog | karbaona mainty N-550 | Lavenona hanorina | Hivarotra lavenona Kremenchug
Ny karbaona mainty toy ny loko
Ara-teknika amin'ny antsipirihany
Ny karbaona mainty N-550 | Lavenona hanorina | Hivarotra lavenona Kremenchug
Ny karbaona mainty no ampiasaina ho toy ny filler amin'ny loko ny indostria, fingotra, fanontam-pirinty ny indostria, ny famokarana vokatra plastika.Tsy mitsahatra ny fampiharana ny karbaona mainty , ny karbaona mainty fanorenana (loko) amin'ny kalitao ambony indrindra. Diniho izay teny delivery. Kalitao avo sy ny vidiny tsara indrindra. ( Ho an'ny mpitsidika ny toerana manokana ny toe-javatra ).
Aprily faha-11, taona 2019
Mivarotra ny karbaona mainty loko ho an'ny fanorenana ny simenitra azo tsapain-tànana ny vahaolana sy ny mixtures, ny famokarana ny hanjaka taila, loko PVC, ny fanamboarana ny loko. Loko lightfastness ary ny rano-izay mety levona. Tsy halazo. Fonosana kitapo polipropilenovye. Ny kely indrindra antoko telo taonina. Ny vidiny dia hivadika. Azo atao ny fivarotana ny anaty baoritra ny karbaona mainty amin'ny alalan'ny fifanarahana. Feno lavenona avy amin'ny roa taonina.
Bandaging rafitra misy fiantraikany tsy ny tanjaky ny rindrina, saingy koa ny endrika masonry modely. Ankoatra ireo rafitra, ambany fifehezan'i, manolotra bebe kokoa ny karazana masonry ny lamina. Noho izany, ny fanakambanana ny endrika sy ny loko ny biriky, ny matoatoa va no, ny loko sy ny suture ny meniscus, mampiasa ny iray na ny hafa masonry fomba afaka mahatsapa ny tena sahisahy architectural vahaolana sy hanome ny fanorenana toetra amam-panahy ny olona iray.
Fanehoan-kevitra ny karbaona buy manan-kilema
OJSC Kremenchug karbaona mainty zavamaniry
Vokatra — Carbon.
Ny Kremenchug karbaona mainty zavamaniry high — performance enterprise amin'ny ankehitriny ara-teknika sy ara-teknolojika ny fitaovana. Ny niely patrana fampiasana instrumentation sy ny automatique ny teknolojia dia mamela ny 98% automate ny dingana.
Ny tantaran ' ny orinasa vita indray 1965, rehefa izany dia nataony ho asa voalohany dingana amin'ny zavamaniry. Ny dingana faharoa dia nanomboka tamin'ny 1967 sy vita tamin'ny 1971.
Noho ny fanitarana ny famokarana fahaiza-manao, toetr'andro lehibe fitaovana sy ny fampidirana ny vaovao ara-teknolojia maoderina fizotry ny famokarana, ny orinasa dia nanjary iray amin'ireo mpitarika mpamokatra entona karbaona mainty any amin'ny firaisana sovietika teo aloha, ary ny lehibe indrindra any Okraina.
Mamokatra 12 marika ny karbaona mainty. Ny karbaona mainty N539, N550 , N339 , N330 , N375 , N220 , N660 namokatra araka ny fepetra ASTM 1765, karbaona mainty П514 , П324, П234, П245 araka ny fepetra GOST 7885-86 sy ny karbaona mainty П324 araka ny fepetra TU U 6-001520.52-083-97.
Ampiasaina amin'ny fanamboarana ny kodiarana, fingotra sy ny herinaratra vokatra, ny kiraro fingotra, ary koa ny fanaovana pirinty sy ny metallurgy.
Fanehoan-kevitra fandraisam-peo OJSC Kremenchug karbaona mainty zavamaniry manan-kilema
Ny karbaona mainty ao ny fanamboarana ny fingotra vokatra.
Mety faha-8, 2010
Ny iray amin'ireo tena zava-dehibe ny fananana ny caoutchouc, plasticity ampiasaina amin'ny fanamboarana ny fingotra vokatra. Afangaro ny fingotra amin'ny singa hafa ny fingotra zavatra, dia ilaina ny manomboka mba hanalefahana, na plasticized amin'ny alalan'ny milina na mafana fitsaboana. Izany dingana izany dia antsoina hoe plastication.
Fanokafana T. Hancock tamin'ny taona 1820 ny mety hisian'ny plasticizing fingotra nanana toerana manan-danja noho ny fingotra orinasa. Ny kneader nanaovana potoanan'i rotor miodina amin'ny lalamby poakaty varingarin'i; fitaovana io dia nanana boky fifindran'ny. Ao amin'ny maoderina fingotra orinasa ampiasaina fijerena telo ireo milina alohan'ny hidirana ao amin'ny singa hafa ny fingotra mifangaro ao ny fingotra. Izany no cauciucuri, Banbury mixer sy kneader Gordon.
Fanehoan-kevitra ny firaketana an-tsoratra ny Karbaona mainty ao ny fanamboarana ny fingotra vokatra. manan-kilema
Ny endriky ny masonry
21 aprily, 2010
Ny endriky ny biriky mihitsy ny hatsaran-tarehy dia mitaky hita maso underscore tsara tarehy fisaka. Inona no ilaina ny mamorona tsara tarehy sy mahatalanjona brickwork?
Matetika dia ampiasaina anatiny ny manondro sy mamorona ny vokatry ny fahasamihafana eo ambonin biriky sy suture.Ho an'ny voajanahary ceramic biriky manam-pahaizana fahazoan-dalana mankany mena miatrika biriky nametraka ny fotsy na ny mainty hoditra vahaolana.
Mainty dia ny loko ny vahaolana dia tanterahina amin'ny manampy trotraka izany ny mineraly loko — ny karbaona mainty.
Ny fototra, mazava ho azy, dia ny simenitra-fasika rihitra. Mba hahazoana avo-tsara dia mainty hoditra vahaolana, amin'ny fari-batch (1 siny ny simenitra ny 3 siny ny fasika) no nanampy ny eo ho eo amin'ny 500 grama ny karbaona mainty (lavenona). Ny tena ohatry ny karbaona mainty ny vahaolana dia tapa-kevitra empirically. Dia tokony ho tsaroana fa vola be loatra ny karbaona mainty dia mety hitarika ho amin'ny filatsahan'ny amin'ny hery toetra mampiavaka ny laona mpiray.
Preimushestvenno gazy raha oharina amin'ny manjarano ary hafa loko ao Tom, fa miavaka mahatohitra ny hafanam, tsy "dobo", tsy "matavy", ary dia tsara interacts amin'ny simenitra-fasika rihitra.
Fanehoan-kevitra ny firaketana an-tsoratra ny endriky ny masonry manan-kilema
Ny fitsipika fototra ny masonry hiatrika biriky
Mba hisorohana ny endriky ny fotsy takela-pahatsiarovana ny masonry, ny fiarovana ny tsara bika sy mateza foto-drafitrasa, tsy maintsy manaraka ny fitsipi-masonry:
Izany no nanolorana azy ho mampiasa ny grout (simenitra PC 400-500) tsy additives. Dia aleo ampiharina ny simenitra atao ao amin'ny vanin-taona mafana. Mampiasa fasika sy ny rano misy tsy misy rano-izay mety levona sira. Ampiharo "mafy" solution, ary mitandrina be loatra dilution amin'ny rano (ny fivezivezena vahaolana tsy tokony ho mihoatra ny 7 mm). Tsy mba hanampy ny vahaolana ny amin'ny additives. Mampiasa ny masonry vao avy nanomana vahaolana. Mba hisorohana ny fampiasana ny recessed seams. Ny ambony indrindra ny halalin'ny ny seam — ny halalin'ny chamfer (tsy mihoatra ny 3 mm lalina any amin'ny masonry), jereo ny Kisary. No. 1. Toy izany seams fahazoan-dalana manao manokana rassevat (jereo ny Kisary.2). Ao ny fananganana masonry tsy mamela ny ingress ny rihitra. Amin'ny fifandraisana amin'ny vahaolana eo stacked masonry — hanala azy amin'ny maina borosy na ny andro manaraka, hamafa ny borosy amin'ny rano. Tsy hamafa ny rindrina anoloana amin'ny burlap-kitapo. Isan'andro, rehefa avy ampiasaina, rakotra rindrina amin'ny tantera-drano ara-nofo (tafo nahatsapa, sarimihetsika, sns.). Tsy ny hatsiaka mbola tsy vita masonry manerana ny sakan'ny manontolo. Raha misy ny fahafaha-mamita fanaovan-fananganana ny tafo talohan'ny frosts — foana hanafina ny rindrina ho an'ny ririnina amin'ny tafo ara-nofo mba hisorohana ny rano ingress an-voids ' ny biriky sy ny fahatongavana ho kotsa ny tonon-taolana eo amin'ny masonry. Noho ny glut ny biriky amin'ny rano, arahin'ny miverimberina ny hatsiaka sy ny thawing dia tsy voahilika flaking sy chipping ampahany crock olona biriky tratran'ny be loatra glut ny rano.Noho izany antony izany dia tsy nanolorana azy ho mampiasa endrika miatrika biriky ho an'ny fananganana ny fefy toy ny biriky fefy manodidina ny taona oversaturated amin'ny hamandoana sy ny iharan'ny miverimberina ny hatsiaka sy ny thawing (ao amin'ny vanim-potoana mihoatra ny in-100), izay mampihena tanteraka ny mateza, ka mahatonga ny famoretana sy ny delamination ny biriky ao amin'ny masonry fefy. Noho ny fefy izany no nanolorana azy ho mampiasa biriky amin'ny rano absorption ny 4-6%. Mba hanatsarana ny mateza ny rafitra dia soso-kevitra mba hitondra ambonin'ny masonry hydrophobic ranon-javatra. Gidrofobizatora impregnation dia nanolorana azy ho mampiasa ny manaraka filaharana: a) alohan'ny nametraka ny anoloana ambonin'ny ceramic biriky mandroboka ao gidrofobizatora ranon-javatra any amin'ny andalana voalohany ny voids; b) rehefa vita ny asa amin'ny tenan'ny coating hydrophobic ranon-javatra maina ambonin'ny masonry, mandra saturation feno, amin'ny tsy maintsy tsofina seams.Ny seam ny masonry no mampiavaka ny endriky ny meniscus (ny ivelany ambonin'ny seam). Namorona ny meniscus, amin 'izany famehezana ny ivelany ampahany amin' ny seam, izay manatsara ny hery toetra ny simenitra mpiara-ary dia toy izany no mampitombo ny fanoherana ny seam rotsakorana. Ankoatra izany, isan-karazany ny meniscus, amin'ny alalan'ny tenany, ny mahakasika ny fanamafisana ny mihasimba ny masonry. Noho izany, ny recessed seams (boribory concave sy concave dvukratny), noho ny milalao ny aloka, tsara ny hanamafisana ny tsirairay biriky, manome ny masonry ny ambony indrindra ny mihasimba. Mifanohitra amin'izany fisaka sy curved seams hanome ny rindrina kokoa fanamiana. Soso-kevitra iraisana hateviny dia ny 8 mm. Ambony indrindra 10-12 mm. ny matevina ny seam, ny kokoa conductivity manana rindrina toy ny conductivity coefficient ny weld ny fototry ny rihitra simenitra dia ambony lavitra noho ny conductivity mafana ny ceramic biriky. Noho izany, ohatra, ao amin'ny sakan'ny 12 mm ny fanoherana ny hafanana conduction hiatrika brickwork mihena mankany amin'ny rindrina amin'ny sakan'ny seam ny 8 mm eo ho eo amin'ny 1.5-2% (tokotokony mafana kajy). Meniscus seam namorona manokana mombamomba rassevat, isaky ny bead karazana manana ny manondro. Hamaky bebe kokoa
Fanehoan-kevitra ny firaketana an-tsoratra ny fitsipika Fototra ny masonry hiatrika biriky manan-kilema
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana
Ny endriky ny biriky mihitsy ny hatsaran-tarehy dia mitaky hita maso underscore tsara tarehy fisaka. Inona no ilaina ny mamorona tsara tarehy sy mahatalanjona brickwork? Matetika dia ampiasaina anatiny ny manondro sy mamorona ny vokatry ny fahasamihafana eo ambonin biriky sy suture. Ho an'ny voajanahary ceramic biriky manam-pahaizana fahazoan-dalana mankany mena miatrika biriky nametraka ny fotsy na ny mainty hoditra vahaolana. Mainty dia ny loko ny vahaolana dia tanterahina amin'ny manampy trotraka izany ny mineraly loko — ny karbaona mainty. Ny fototra, mazava ho azy, dia ny simenitra-fasika rihitra. Mba hahazoana avo-tsara dia mainty hoditra vahaolana, amin'ny fari-batch (1 siny ny simenitra ny 3 siny ny fasika) no nanampy ny eo ho eo amin'ny 500 grama ny karbaona mainty (lavenona). Ny tena ohatry ny karbaona mainty ny vahaolana dia tapa-kevitra empirically. Dia tokony ho tsaroana fa vola be loatra ny karbaona mainty dia mety hitarika ho amin'ny filatsahan'ny amin'ny hery toetra mampiavaka ny laona mpiray. Preimushestvenno gazy raha oharina amin'ny manjarano ary hafa loko ao Tom, fa miavaka mahatohitra ny hafanam, tsy "dobo", tsy "matavy", ary dia tsara interacts amin'ny simenitra-fasika rihitra.
Fanehoan-kevitra ny firaketana an-tsoratra ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana manan-kilema
Lavenona mainty fanorenana no ampiasaina mba ampio rihitra. Ny fampiasana ny mainty lavenona dia ataovy tonon-taolana eo brickwork maizina ary mijery ny an - trano tsara tarehy kokoa sy mendrika. Lavenona mainty fanorenana napetraky ny orinasa dia tena avo lenta sy mateza , ary tsy toy cheap imitations mpisolo toerana (nandoro kodiarana... sns) dia tsy voasasa sy reraka avy any amin'ny vanin-taolana.
Copyright © 2010-2019 Ny karbaona mainty N-550 | Lavenona hanorina | Hivarotra lavenona Kremenchug
Ny fananganana sy fampiroboroboana ny toerana www.prestige.dp.ua